ကမ်းလှမ်းမှုကိုမိတ်ကပ် Brush ခရီးသွားသတ်မှတ်မည်, စိတ်တိုင်းကျမိတ်ကပ် brush, ဘဲဥပုံမိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ မှစ.
ဖေါ်ပြချက်:မိတ်ကပ် Brush ခရီးသွားသတ်မှတ်မည်,custom မိတ်ကပ် Brush,ဘဲဥပုံမိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည်,7Pcs Brush သတ်မှတ်မည်,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > brush သတ်မှတ်မည် > 7pcs Brush သတ်မှတ်မည်
7pcs Brush သတ်မှတ်မည် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, မိတ်ကပ် Brush ခရီးသွားသတ်မှတ်မည်, custom မိတ်ကပ် Brush ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ဘဲဥပုံမိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
သက်တံ့ Synthetic ဆံပင်မိတ်ကပ် Brush ကိုငျတှယျ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
7 PCs mini ကိုခရီးဆောင်ခရီးသွားမိတ်ကပ်ဖြီး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ခရီးသွားများအတွက် Mini 7pcs Makeup Brush Set ဒီ Mini 7pcs Makeup Brush Set သည် I ည့်သည်များအတွက် Mini သစ်သားလက်ကိုင်နှင့်အလူမီနီယမ် ferrule နှင့် ၁၀၀% Eco-friendly ဒြပ်စင်နှစ်ခုပါသောဆံပင်နှင့်အတူပါ ၀ င်သည်။ ဒီကိရိယာမှာ အမှုန့်ဖြီး...
အလွန်ချစ်စရာကောင်းသော 7pcs အလှကုန် Mini Makeup Brush Set FOR + Powder + BLUSH + CONCEALER + Define + HIGHLIGHTER + Blending brush + Eye SHADOW အလွန်ချစ်စရာကောင်းသော 7pcs အလှကုန် Mini Makeup Brush Set အလူမီနီယမ် ferrule၊ ၁၀၀% Eco-friendly...
Smudge Brush ပုံစံ7Piece ကိုတက်စေပါမိတ်ကပ်ဖြီး Powder + ဖုံးကွယ် + မျက်နှာမပျက် + မီးမောင်းထိုးပြ + မျက်လုံးအရိပ် + မျက်ခုံးဖြီး + နှုတ်ခမ်းဖြီး FOR7သတ်မှတ်ပေးသည် Smudge Brush ပုံစံ7Piece ကိုတက်စေပါမိတ်ကပ်ဖြီး အဆိုပါပလတ်စတစ်ဟာလူမီနီယံ ferrule,...
သစ်သား set 7PCS သောကျောက်တို့သည်စပါးကိုမိတ်ကပ်ဖြီး ဒီအလူမီနီယံ ferrule, 100% Eco-friendly ဒြပ်နှစ်ခုအရောင်ဆံပင်နှင့်အတူသစ်သားသတ်မှတ်ထားသောကျောက်တို့သည်စပါးကိုမိတ်ကပ် brush ကို 7PCS ။ ဤသည်ကိရိယာအစုံတို့ပါဝင်သည်: အမှုန့်ဖြီး tapered, ပျော့ပျောင်းနှင့်...
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်7Piece မိတ်ကပ် SET ဝှေ့နေတယ်: ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သို့မဟုတ်မှာ-အိမ်မှာအသုံးပြုရန်လိုအပ်ရှိသမျှကိုအခြေခံလိုအပ်ချက်များပါဝင်သည်။ Yacai Styles, မျက်နှာ brush, မျက်လုံးစုတ်တံ, နှုတ်ခမ်းဖြီး,...
အိတ်ဆောင်, နယ်လှည့်နေစဉ်အတွင်းယူရန်လွယ်ကူ စုတ်တံစွမ်းဆောင်ရည်ရေရှည်တည်တံ့ဘို့ဒြပ်ဖိုင်ဘာနဲ့လုပ်ထားတဲ့နေကြတယ်7PCs မိတ်ကပ်သတ်မှတ်မည်နေ့စဉ်မိတ်ကပ်များအတွက်သင့်လျော်သောများမှာဝှေ့နေတယ် ပစ္စည်း: Synthetic ဆံပင်, ကြေးနီ, သစ်သား ပုံစံ: Powder Brush,...
တရုတ်နိုင်ငံ 7pcs Brush သတ်မှတ်မည် ပေးသွင်း
ဒီနေရာတွင် 7pcs Brush သတ်မှတ်မည် အတွက်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, ငါတို့ မိတ်ကပ် Brush ခရီးသွားသတ်မှတ်မည်,custom မိတ်ကပ် Brush,ဘဲဥပုံမိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည်,7Pcs Brush သတ်မှတ်မည်,, ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပို့ကုန်ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီပို့ကုန်အရည်အချင်းပြည့်ထုတ်ကုန်သေချာစေရန် 7pcs Brush သတ်မှတ်မည် ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဖြစ်စဉ်များတိုးတက်ပါပြီ။
သငျသညျ 7pcs Brush သတ်မှတ်မည် အတွက်ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုပိုမိုသိလိုလျှင်, parameters တွေကို, မော်ဒယ်များ, ပုံများ, စျေးနှုန်းများနှင့် မိတ်ကပ် Brush ခရီးသွားသတ်မှတ်မည်,custom မိတ်ကပ် Brush,ဘဲဥပုံမိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည်,7Pcs Brush သတ်မှတ်မည်,, အကြောင်းကိုအခြားသတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုဖို့ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို click ပါ။
သငျသညျအုပ်စုတစ်စုသို့မဟုတ်လူတစ်ဦးချင်းစီများမှာမည်သို့ပင်ကျနော်တို့ 7pcs Brush သတ်မှတ်မည် အကြောင်းကိုတိကျမှုနှင့်ပြည့်စုံသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အတူသငျသညျပေးအတတျနိုငျဆုံးမည်!
မိတ်ကပ် Brush ခရီးသွားသတ်မှတ်မည် custom မိတ်ကပ် Brush ဘဲဥပုံမိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည် 7Pcs Brush သတ်မှတ်မည် မိတ်ကပ် Brush အပြည့်အဝသတ်မှတ်မည်